Maraykanka, 24 December 2013
Talaado 24 December 2013
Mareykanka oo Ciidamo u Diraya S. Sudan
Miltariga Mareykanka ayaa sheegay in askar gaareysa 150 oo kuwa badda ah ay u dirayaan dalka Suudaanta Koonfureed si ey halkaasi uga soo saaraan muwaadiniinta Mareykanka una difaacaan dhismayaashooda
S. Sudan: Dad Maraykan ah oo la soo Daadgureeyey
Dalka Maraykanka ayaa sheegay in si nabad ah uu muwaadiniintiisa uga soo daad gureeyey magaalada ay mucaaradku haystaan ee Bor ee dalka K. Sudan.
Linda Greenfield oo Booqatay Muqdisho
Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibedda Maraykanka ee Arrimaha Africa, Linda Greenfield ayaa booqasho gaaban ku tagtay Muqdisho, iyadoo sheegtay in Maraykanka ay ka go'an tahay taageerista dowladda iyo dadka Somalia.
Levinson oo la Sheegay inuu Basaas Yahay
Labo ka mid ah warbaahinta Maraykanka ayaa sheegay in nin Maraykan ah oo toddobo sano ka hor la waayey, isaga oo galay dalka Iran, uu ku lug lahaa howlo basaasnimo oo uu hay’adda CIAda u sameynayey.
Obama oo Yaboohay Lacag lagula Dagaalamayo HIV
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa shaaciyey hindise cusub oo kor loogu qaadayo cilmibaaris la xiriirta daweynta cudurka HIV-ga
Arr. Mareykanka: Heshiiska Nuclear-ka Iran
Barnaamijka Ammuuraha Mareykanka waxa aan todobaadkan ku eegaynaa, heshiiskii maalintii Axadda ay wadagaareen wadamada xubanaha joogtada ka ah Golaha Ammaanka ee QM oo uu wehliyo dalka Jarmalka iyo Wadanka Iran ee Hubka Nuclear-ka.
Iran oo Heshiis la Gashay Quwadaha Dunida
Dowladda Iran iyo dalalka ugu awoodda badan dunida ayaa heshiis horudhac ah oo lix bilood soconaya ka gaaray barnaamijka Nukliyeerka ee Iran, iyo cunaqabateynta oo laga qafiifiyo Iran.
Obama oo 16 Shaqsi Gudoonsiiyay Biladda Xuriyadda
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ayaa gudoonsiiyay Biladda Madaxweyne ee dhinaca rayidka ee xuriyadda 16 qof oo Mareykanka u dhashay oo magac leh xaflad shalay lagu qabtay Aqalka Cad.
Guushii 2aad ee Soomaalida Maraykanka
Axmed Maxamed Xasan ayaa noqday qofkii labaad ee Soomaali ah ee ku guulaystay doorashada golayaashaa deegaanka ee Maraykanka isaga oo laga soo doortay degmo ka tirsan gobolka Georgia.
Faallo: Doorashada Maraykanka
Waxa shaley waddanka Mareykanka ka dhacey doorashooyin ay ku jireen Guddoomiyayaal Gobol oo indha gaar ah lagu hayey oo si weyn looga dhur sugayey cidda ay guushu raaci doonto.
Minnesota: Cabdi Warsame oo Guuleystay
Cabdi Warsame oo ah mid ka mid ah Soomaalidii ka tartamaysay doorashooyinka gobolka Minnesota ayaa ku guuleystay xilka Golaha Deegaanka ee magaalada Minneapolis, gaar ahaan degmada 6aad.
Soomaali ka Tartamaysa Doorashada Minnesota
Maanta waxa dalka Maraykanka ka bilaabanaya doorashooyinkii deegaanada iyo kuwa guddoonka waxbarashada. Doorashooyinka oo Maryakanka oo dhan ka dhacaya ayaa haddana bulshada Soomaalidu ay si gaar ah u eegayaan doorashooyinka gobolka Minnesota.